China Breathable Film Coating PP Spunbond Na-abụghị Ihe Nkpuchi akwa maka Nlepụ Mwepu Gowns na ndị na-emepụta | ShiningPlast
Ihe mkpuchi akwa Polypropylene Spun-bond Nonwoven bụ bụkwa ngwaahịa anyị kachasị mkpa kemgbe afọ iri ole na ole gara aga na mpaghara akwa anaghị ere. Karịsịa n'oge ntiwapụ COVID-19, ihe mkpuchi PP Spun-bond na-enweghị uwe a rụpụtara n'ụlọ ọrụ anyị ka ejiri n'ọtụtụ ụdị ọrụ nchekwa dị iche iche.
Ibu ibu: 40-60gsm
Ihe: Ihe mkpuchi PE + PP Spunbonded Nonwoven akwa
Ozo: Dị ka ndị ahịa rịọrọ
Agba: Dị ka ndị ahịa rịọrọ
Size: 6 '* 8' / 8 '* 8' / 8 '* 10' Max ka 100 '* 100'
Obibi akwụkwọ: Nbipụta
Ọ bụrụ na ịnwere ihe ịchọrọ maka akwa mkpuchi PP spunbond na-abụghị nke a kpụrụ akpụ, anyị ga-achọ ịkwado gị ngwaahịa kachasị mma na ọnụahịa na ọrụ kachasị mma.
Ibu ibu 40-60gsm
Ihe Ihe mkpuchi PE + PP Spunbonded Nonwoven akwa
Ozo Dị ka ndị ahịa rịọrọ
Ejiri akwụkwọ mpịakọta 2 "ma ọ bụ atọ" n'ime yana polybag n'èzí.
Ngwurugwu: Ihe ndi eji acho ihe eji akwa PP spunbond bu nke ndi a kpachaara agbacha bu ndi ana-eku ume, nke ndi nile n’etu iche n’iche iche. Ngwa dị fechaa na-agbanwe agbanwe maka nkasi obi na-enweghị atụ.
Anti Ọrịa nje: Ọ nwere ike igbochi mbufụtasị nje na elu.
· Ihe mgbochi: Antistatic gama ya na - eme ka akwa ahu buru ihe agha.
· Enyi gburugburu ebe obibi: enweghi ihe ndi ozo na ese ihe na silicone
Akpụkpọ ahụ anaghị eme ka akpụkpọ megharịa ahụ
Nke gara aga: Igwe na-egbu maramara
Osote: PP Spunbond na-abụghị nke a kpụrụ akpụ maka akwa niile
Ugbo Nowoven Mara